août 2019 · déliremadagascar
CEPE 2022: Nizara sakafo mafana ho an’ny mpiadina sy mpandraharaha miisa 1600 ny kaominina Alasora
ORANGE MADAGASCAR : Ankizy miisa 1300 ho zaraina fanomezana
STARTIMES: Fandaharana mampiala voly ranoray no hita ao amin’ny UP TV
FONDS YAVARHOUSSEN : Nandray anjara tamin’ny famokarana ny horonantsary « Graines d’espoir » ny ankizy sy tanora malagasy
Archives mensuelles août 2019
Socio-eco	 31 août 2019 R Nirina
PRODUCTION BANCAIRE : BMOI a réussi le renouvellement de sa certification
Certifiée depuis 18 ans, la BMOI a réussi une nouvelle au mois de juin 2019 le renouvellement de sa certification pour toutes ses activités de production bancaire. Continuer la lecture →
PROJET 930: Mampihena ny taham-pahavoazana vokatry ny loza voajanahary
Ain’olona maro voavonjy, mihena ny fahavoazana ara-materialy. Continuer la lecture →
VONDRONA ERAOPEANINA SY FANJAKANA MALAGASY : Mifampatoky ny roa tonta
Mitohy ny fanampiana ataon’ny vondrona eraopeanina ny fanjakana malagasy ho fampandrosoana an’i Madagasikara amin’ny lafiny toekarena. Continuer la lecture →
Socio-eco	 28 août 2019 R Nirina
FOARA KANTON’I GASIKARA : Mampiakatra avo ny lanjan’ny asa tanana malagasy
Asa tanana malagasy voafantina sy tsara kalitao ary amin’ny endriny isan-karazany. Continuer la lecture →
politique	 28 août 2019 R Nirina
DISTRIKAN’AMBOHIDRATRIMO: Manana fanantenana ireo mpampianatra FRAM
“Efa tapitra iny ny fifidianana solombavambahoaka, tapitra niaraka tamin’iny ihany koa ny disadisa politika”, hoy ny solombavambahoaka Rakotoarisoa Johnny nandritra ny fametrahana azy tamin’ny fomba ofisialy, ny sabotsy 24 aogositra 2019 teny amin’ny kianjan’Ambohidratrimo. Continuer la lecture →
MEDAIR SY NY LOZA VOAJANAHARY: Haseho an-tsary ny fahasamihafan’ny any Atsimo sy Avaratra
Iombonan’ny faritra Atsimo sy Avaratr’i Madagasikara ny olan’ny rano. Continuer la lecture →
Socio-eco	 28 août 2019 lynda
TSENAM-BARO-PANJAKANA: Hanafaingana ny fanatanterahana ny fandaharan’asam-panjakana
Singa iray manafaingana na tsia ny fanatanterahana ny programam-panjakana ny tsenam-baro-panjakana. Ny olana anefa dia mivezivezy be ireo mpikarakara ny antontan-taratasy satria toerana samihafa no misy ireo birao hikarakara izany. Continuer la lecture →
Socio-eco	 27 août 2019 lynda
TSARADIA: Hiitatra any amin’ireo faritra misarika mpizahantany
Tale jeneraly vaovao, paik’ady mihatsara hatrany. Io ny fanamby ho tanterahan’ny Tsaradia. Nandalo fikorontanana ity zotra anatiny ity teo anelanelan’ny volana jolay sy aogositra 2019. Continuer la lecture →
Socio-eco	 26 août 2019 R Nirina
MAGE 4 TAO ANTSAHAMANITRA : Fahombiazana ho an’ny mpikarakara
Niavaka ny fampisehoana nataon’ny MAGE 4 izay nokarakarain’i IVENCO tamin’ny alahady 25 Aogositra 2019 lasa teo. Continuer la lecture →
Sport	 22 août 2019 lynda
Resaka voalohany nataon’i Nicolas Dupuis taorian’ny CAN 2019. Nihaona tamin’ny mpanao gazety ny “club des partenaires” sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny 22 aogositra 2019 teny Anosy. Continuer la lecture →
SYNAD: « Manomboka izao dia miandany am...
ORANGE DIGITAL CENTER – SMARTONE: ...
COMFWB: 40 femmes entrepreneurs malgache...
FIRAISAMONIM-PIRENANA: Tsy marina ny fil...
ORANGE MADAGASCAR : Ankizy miisa 1300 ho zaraina fanomezana 20 juin 2022
STARTIMES: Fandaharana mampiala voly ranoray no hita ao amin’ny UP TV 20 juin 2022
FONDS YAVARHOUSSEN : Nandray anjara tamin’ny famokarana ny horonantsary « Graines d’espoir » ny ankizy sy tanora malagasy 17 juin 2022
SYNAD: « Manomboka izao dia miandany amin’ny lalàna velona izahay, tsy mpiasan’ny antoko fa mpiasam-bahoaka » 15 juin 2022